यो जिन्दगिमा शिल्पालाई के भयो ? भिडियो - सुदूर नेपाल
Dinesh khaptadi July 21, 2019 0
मिडियामा चलचित्र निर्माता छवीराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको बिषय भाइरल बनिरहेको बेला केहि म्युजिक कम्पनि हरुले यस अघिनै सुटिंग भईसकेका शिल्पा द्वारा अभिनित म्युजिक भिडियो हरु बजारमा सार्वजनिक गर्ने क्रम जारि छ। हुन पनि ओ , यति बेला बाजारमा हल्ला भनेकै शिल्पा र निर्माता छवी ओझाको घरेलु झगडा र त्यस बाट उत्पन्न समस्याको रहेको छ।
बिगत लामो समय देखि संगै बस्दै आएका छवी र शिल्पाले बिहे कहिले गरे भन्ने कुरा त त्यती चर्चाको बिषय बन्न सकेन तर अहिले एक्कासी शिल्पाले छविको बिरुद्द प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराए पछी माहोल गर्मिएको हो। उनीहरु बीच पहिले देखिनै कुराहरुमा बिमेल थियो भन्ने सुन्नमा आए पनि शिल्पाले आफुलाई छविले चरम यातनामा राखेको भन्दै उजुरी दिएको बताएकी थिईन।
छ महिना पहिले मात्र बिहे दर्ता गराएका छवी र शिल्पाले अहिले यति छोटै समयमा शिल्पाले गरेको कामको सबैले संकाको नजरले हेरेका छन। प्राय सबैजनाले शिल्पाले पेशाको लागि यसो गरेकी भन्न भ्याएका छन भने कतिले उनलाई समर्थन गर्दै घरेलु हिंशा साहना नहुने पनि बताएका छन्।
यसै बिचमा चर्चित नेपाली गायिका अञ्जु पन्तकाे थहा छैन जिन्दगि बजारमा सार्वजनिक भएकाे छ । उक्त भिडियाे गितमा नायिका शिल्पा पाेख्रेललाइ मुख्य भुमिकामा राखिएकाे देखाइएकाे छ । काठमाण्डाैकाे एक्सन स्टुडियाेमा रेकर्ड गरिएकाे उक्त भिडियाे गितले यु टुबमा पनि राम्रै चर्चा पाइरहेकाे छ । भिडियाे नायिका पाेख्रेलकाे मार्मिक दृश्यहरू देखाइएकाे छ ।
पछिल्लो समय नेपाली सिने जगतमै हङ्गामा मच्चाउने बिषय बनेको छ । त्यो बिषय हो नायिका शिल्पा पोखरेल र फिल्म निर्माता छविराज ओझाको घरायसी झगडा र त्यसको बढ्दो रुप नै हो । नायिका शिल्पा पोखरेलले आफुमाथि गरेलु हिंसा भएको भन्दै आफ्नै पति छविराज ओझा बिरुद्ध प्रहरीमा केस गरेकी थिइन् । तर त्यो घटनाले यतिबेला नेपाली सोसल मिडिया तथा अनलाईन समाचार पत्रिकामा त्यो बिषयले निकै व्यापकता पाएको छ ।यो बिषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आ आफ्नो धारणा राखेका छन् । सिने क्षेत्रमा सक्रिय कलाकार तथा अन्य व्यक्तिहरुले शिल्पा र छबीको बिषयमा आफ्नो फरक फरक मत राखेका छन् । यसै बिषयमा समसामयिक बिषयमा बोल्ने पुण्य गौतमले नायिका शिल्पा र फिल्म निर्माता छबीराजको बिषयमा बोलेका छन् । फिल्म निर्माता छबी र नायिका शिल्पा बीच डिभोर्सनै भएपनि आकासै खस्ने हो र ? के धर्ति नै फाटीहाल्छ ? के भूकम्प नै जान्छ? भन्दै गौतमले यो बिषय त्यति ठुलो नभएको बताएका छन् ।
Previous Post: शिल्पा र छबिराज डिभोर्स भए आकासै खस्ने हो र-पुण्य गौतम? – भिडियो
Next Post: रातारात सोनाक्षीकाे बाहिरिए गोप्य अं*ग देखिने तस्बिर, हेर्नुहाेस